Ukukhetha eyona Mac kwikholeji | ndisuka kuMac
Ukukhetha eyona Mac kwikholeji
UJordi Gimenez | | Iikhompyuter zeMac
Omnye wemibuzo esidla ngokuzibuza yona xa kuthengwa imaphu yaseyunivesithi ngowokuba sikhethe eyiphi. Ngale ndlela kukho iindlela ezimbalwa ezikhoyo kwaye nganye isimahla. khetha izixhobo ezikufaneleyo ngokweemfuno zakho kunye nepokotho yakho. Kwaye kukuba kwi-Apple sele isaziwa, unokuchitha ngokwaneleyo ukusebenza kwaye izixhobo ziphendula kakuhle, ziyasebenza kwaye zilungile ngokwenene okanye zichithe ngaphezulu kwaye izixhobo zinamandla kwaye zinomtsalane.
1 Iikhompyuter ze-Apple zekholeji
2 Uyilo lweMac kunye nobunzima
3 Iimpawu zeMacs ngeprosesa yeM1
4 Inkwenkwezi yabafundi baseyunivesithi yiMacBook Air
4.1 Ixabiso leMacBook Air lelinye lawona aqinileyo
Iikhompyuter ze-Apple zekholeji
Ukukhetha eyona khompyuter ye-Apple eyunivesithi ngumsebenzi onzima kwaye akukho lula ukuphendula umbuzo malunga nokuba yeyiphi ikhompyuter esilungele ngakumbi okanye ngaphantsi. zininzi izinto eziguquguqukayo ezigqiba ukugqiba ukuthengwa kwesixhobo esinye okanye esinye.
Kwiimeko ezininzi, ngezixhobo ezisisiseko ezithengiswa nguApple, sinokucombulula amathandabuzo ngokukhawuleza, kodwa kukho nabafundi baseyunivesithi abakhetha izixhobo ezinamandla ngakumbi. Kule meko nge ukufika kweeprosesa ezintsha ze-Apple Silicon M1, inkampani ibethe itafile ngokuchasene nokungafani kunye ne-Intel. Ngoku kulula ngandlel’ ithile ukukhetha iMac kwaye ekubeni zonke zinamandla kunye nokusebenza kakuhle kwamandla ukutshatisa izixhobo.
Yiba nokuba kunjalo, ukukhetha iMac yeyunivesithi kunokuba yintloko encinci kumfundi, ke namhlanje siya kuzama Sombulula amanye amathandabuzo akhoyo xa kufikwa ekufumaneni entsha IMac engaphezulu nje kwe-1000 yee-euro ukuya kwiiklasi nokusebenza naye.
Uyilo lweMac kunye nobunzima
IiMacs ezintsha ze-Apple zinoyilo olunyamekileyo kwaye nangona iimodeli zeMacBook Pro, kubonakala ngathi zibuyele umva kancinane kwixesha elidlulileyo kunye nezo milo zijiyileyo. babonelela ngamazibuko amaninzi abathi kwiimeko ezininzi abafundi baseyunivesithi bangawasebenzisi. Yiyo loo nto ekuqaleni iMacBook Pro entsha ene-M1 processor ibingayi kuba sisixhobo esicetyiswayo sabafundi baseyunivesithi okanye abafundi. Oku akuthethi ukuba kuyo nayiphi na imeko ukuba umsebenzisi ufuna ukukhetha iMacBook Pro yinguqulelo embi, endaweni eyahlukileyo.
Kule meko, ubunzima bezixhobo kunye nezixhobo ezintsha ze-intshi ezili-16 eziqaliswe yi-Apple, sibhekisela kuyo ukuya kwi-16 ″ iMacBook Pro, ayizukuba yeyona nto ilungileyo ukuyiphatha isoloko ilayishwe kubhaka nangona ubuncinci obungaphezulu kweekhilogram ezimbini zobunzima enabo bunyamezeleka.
Ukuba sigxile kwi I-14-intshi yeMacBook Pro, ubunzima bayo be-1,61 kg iyanyamezeleka noko kodwa ayiseyiyo eyona isebenzayo xa kuziwa ekuziphatheni imini yonke ngobhaka okanye ebhegini. Siyaphinda, oku akufuneki kube yinto ebuyisela ukuthenga kwakho ukuba ufuna ukuzifumana, zizixhobo ezicetyiswa ngokupheleleyo kodwa aziyi kuba yeyona MacBook ibalaseleyo yeyunivesithi ngenxa yobungakanani kunye nobunzima.
Iimpawu zeMacs ngeprosesa yeM1
Kule meko, izibonelelo zeeMacs ezintsha nge-M1 zikhohlakele. Ezi processors zitsha ziqaliswe yi-Apple zinika umsebenzisi amandla anomdla ngokwenene kunye nomlinganiselo wokuzimela, ngoko ke ingcebiso yokuqala esikunika yona kukuba, ukuba unako, yiya ngqo kwiikhompyuter kunye nale prosesa, kungakhathaliseki ukuba yintoni ikhompyutha. Kwaye kunjalo Kumba wohlaziyo, ikwayinto ebalulekileyo ukuba neprosesa entsha ngaphakathi kweMac. kuba kwixesha elizayo iya kuhlaziywa ngokuqinisekileyo.
Xa sivula iwebhusayithi ye-Apple kwaye sifumana iMacBook Pro ayinakuphepheka ukucinga ngabo kwikholeji la maqela anamandla ngokwenene kwaye anomdla xa ucinga ngokuthenga iMac eyunivesithi, kodwa kufuneka usoloko ucinge ngokuphatheka kunye nemodeli ye-intshi eyi-16 ayizukuba yeyona icetyiswayo kuyo.
Ezinye iimodeli zeMacBook Pro, zombini i-13-intshi kunye ne-14-intshi, zinokuwela phakathi kwezi "zixhobo zicetyiswayo" zeyunivesithi, nangona zingadingi nyani amazibuko amaninzi ekugqibeleni. ukhetho lweeyantlukwano-ixabiso lunokugqiba.
Inkwenkwezi yabafundi baseyunivesithi yiMacBook Air
Okwangoku sineMacBook Air kuphela eshiyekileyo. Eli qela belisoloko lilelona likhethwa ngabafundi ngenxa yobunzima obuphantsi enabo, le yi-1,29 kg. Ukufika kweeprosesa ezintsha zeM1 kwenza ukuba eli qela ngokungathandabuzekiyo libe lelona libalaseleyo kwimbali yonke yeMacBook Air.
Ngaphambili, ekuphela kwembangi eyayinayo etafileni ngokuphathekayo, iimpawu kunye nobukhulu yayiphuma kwinkampani yeCupertino. i-12-intshi yeMacBook. Ekugqibeleni, ezo zixhobo zaye zarhoxiswa kwiimarike, zanikezela kwi-MacBook Air njengeyona ndlela ingcono yokuphatheka.
Ngoku kunye ukufika kweeprosesa zeM1 ezi MacBook Air iya kuba sesona sixhobo sibalaseleyo xa ubasa eyunivesithi okanye esikolweni., ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo kodwa ubukhulu becala ngenxa yesikrini sayo esikhulu se-13,3-intshi (diagonal) ye-LED enobuchwepheshe be-IPS, isisombululo somthonyama se-2.560 nge-1.600 kwi-pixels ye-227, engaphezulu kokwaneleyo kwiimeko ezininzi.
Ixabiso leMacBook Air lelinye lawona aqinileyo
Ixabiso yinto ekwadlala ngokuthanda iMacBook Air. Kwaye kukuba nangona kuyinyani ukuba i-13-intshi ye-MacBook Pro nayo inexabiso elifana nelo le-MacBook Air kunye neprosesa ye-M1, leyo. inxalenye ukusuka 1.129 euro iinzuzo ngokwemiqathango yokuphatheka ngcono kakhulu imodeli Air. Yiyo loo nto yinkwenkwezi xa ukhetha ikhompyuter yokuqala yeyunivesithi.
Kucacile ukuba wonke umntu unokukhetha iqela alifunayo eyunivesithi kodwa kule meko abafundi abaninzi baseyunivesithi baqala ngelinye lala maqela kwaye ekuhambeni kwexesha bagqibe kwelokuba balithengise ukuze bathenge imodeli ephezulu. Gcina ukhumbula ukuba iikhompyuter ze-Apple azilahlekelwa yimali eninzi njengezinye iikhompyuter, ke xa uzithengisa ukuze uthenge into enamandla ngakumbi okanye engcono, utyalo-mali lokuqala luya kuvuzwa.
IMacBook Air ngokungathandabuzekiyo iya kuba sisixhobo esikhethwe luninzi lwenu eyunivesithi kwaye Sesinye sezona zigqibo zilungileyo ngokubhekiselele kumgangatho, amandla, ukuphatheka kunye nexabiso. Ke wonke umntu ukhetha eyona nto ibafaneleyo, kodwa le iya kuba yeyona ndlela yethu ilungileyo kwikholeji.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Ukukhetha eyona Mac kwikholeji
IMacBook Pro M1 Max iqinisekisiwe ukuba yeyona ilungileyo kubafoti
Ii-AirPods 3 zifumana uhlaziyo olutsha